Juun 2019 Loo-shaqeeyaha ayaa booqda goobta Mashruuca Pilot Bhora HED
Kadib rakibaadda oo si guul leh loo dhammaystiray Juun, Loo-shaqeeyaha ayaa caddeeyay horumarka goobta wuxuuna muujiyey qanacsanaanta tijaabada tijaabada (oo ay ka hooseyso kala badh Kaydka Kaydka) ee biyo xidheenka HED. Mashruucu wuxuu wareejinayaa kadib roobka kadib tijaabada tijaabada ah ee HED (oo hoosjirta Kaydka buuxa).
Julaay 2019, booqashada BIC ee Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka ee Myanmar
Horraantii bishii Julaay, General Chen wuxuu hal koox oo baarayaal ka ah BIC u horseeday booqashada wasiir ku xigeenka iyo agaasimaha wasaaradda beeraha iyo waraabka ee Myanmar. Labada dhinac waxay ka wada hadleen sidii loo sii xoojin lahaa iskaashiga dhinacyada kheyraadka biyaha. Injineeradayagu waxay soo bandhigeen tikniyoolajiyad cusub oo hidda-sare ...